पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. गंगोल नियुक्त • Health News Nepal
ललितपुर, २७ चैत्र २०७७
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा प्रा.डा. राजेशनाथ गंगोल नियुक्त भएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृद्धयेस त्रिपाठीको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. गंगोल नियुक्त गरेका हुन्।
यस अघि प्रा.डा. गंगोललाई समितिले एक नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो।
यस्तैगरी कमिटीले दोस्रो नम्बरमा प्रा.डा. दानबहादुर कार्की र तेस्रो नम्बरमा प्रा.डा. अनिलकुमार मिश्रको नाम सिफारिस गरेको थियो । प्रा.डा. गंगोल त्यसअघि प्रतिष्ठानका रेक्टरमा हुनुहुन्थ्यो।
नेपाल सरकारले केही दिन अगाडि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. मंगल रावल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. डुकबहादुर क्षेत्रीलाई नियुक्त गरिसकेको थियो ‌
Tags: #government of Nepal#Health and population ministryCorona Virus #Covid19Patan hospitalProf.dr.Rajeshnath gangol